MarketerHire: aiza no hanakaramana mpivarotra tsy miankina amin'ny varotra | Martech Zone
Fanamby ho an'ny fikambanana maro ity taona ity. Na eo aza ny maha-anecdotal azy, fironana telo hitako fa:
Hafanàm-po an Transformation - ny fifantohana teo aloha tamin'ny zavatra niainan'ny mpanjifa ivelany dia niova ho mandeha ho azy anatiny sy fampidirana amina fikambanana lehibe satria mampihena ny mpiasa sy ny fandaniana.
Ekipa lavitra - noho ny fiovana amin'ny fiasana an-trano mandritra ny areti-mandringana, ny orinasa dia nanova ny firehan-keviny amin'ny fiasana an-trano ary misokatra kokoa amin'ny fiaraha-miasa lavitra.
Fifanarahana tsy miankina - Orinasa lehibe dia mampitombo ny mpiasan'izy ireo amin'ny fotoana maharitra miaraka amin'ireo matihanina amin'ny fifanarahana sy ny marketing any ivelany. Manomboka amin'ny "CMO for Hire" ka hatrany amin'ny mpamorona sary… lasa mpiorina lehibe amin'ny orinasa tsirairay ny mpandraharaha.
Aiza no hahitana ireo mpitovo tsy miankina amin'ny marketing
Na dia betsaka aza ny tranonkala an-tserasera hahitana talenta, dia vitsy ny loharanom-pahalalana manampy amin'ny fanaraha-maso sy ny fitantanana ny talenta izay nifanarahana. Ary koa, ny ankamaroan'ny serivisy dia mitaky fanoratana marobe sy fotoana fifanarahana ary sarany famaranana na dia eo aza ny tahan'ny tsy fahombiazana lehibe.
MarketerHire dia serivisy hividianana talenta voarindra mialoha mba hahafahan'ny orinasanao manampy mpivarotra efa voaporofo ao amin'ny ekipanao ao anatin'ny herinandro latsaka! Manolotra sarany ambany amin'ny karama izy ireo, tsy misy sarany famaranana, ary manana taham-pahombiazana ambany dia ambany amin'ny fananana karama isan'ora, tapa-potoana, na mpiasa maharitra.
Ahoana ny fomba fivarotana MarketerHire Vets
MarketerHire dia manana fizahana fanaraha-maso tsy miankina manerantany ary mpivarotra ny tenan'izy ireo - noho izany dia mitady manam-pahaizana voaporofo am-pitiavana sy fiara izy ireo. Mpivarotra an-jatony no manao fangatahana isam-bolana, saingy MarketerHire ny karama dia latsaky ny 5% ihany. izy ireo:
Raiso an-tsehatra ireo mpilalao ambony - manara-maso ireo vondrona Facebook, forum ary LinkedIn izy ireo hahafantarana sy hanamarinana ny talenta.
Famerenana ny fahaiza-manao lalina - mandinika ny traikefa matihanina, ny hevitry ny mpanjifa ary ny santionany amin'ny asa izy ireo ary koa ny fanombanana fahaiza-manao manokana.
Resadresaka amin'ny horonantsary - hanombanana ny fahaizan'ny fifandraisana, ny fisainana kritika ary ny matihanina.
Tetikasa fitsapana - aorian'ny fanekena, ireo mpilatsaka hofidina dia notendrena amina tetik'asa fitsapana miaraka amina toe-javatra tena izy hanehoana ny fahaiza-manao, ny fahazotoany, ny matihanina ary ny tsy fivadihana.
Fahamarinana mitohy - Averina dinihina amin'ireo mpanjifa isaky ny 2 herinandro ny fahombiazana mba hahazoana antoka ny serivisy sy ny serivisy kalitao.
Ny fizotry ny MarketerHire
Hiara-miasa amin'ny mpitantana marketing ianao mandritra ny dingana rehetra. Hiresaka momba ny tetikasanao aminao izy ireo, hanampy amin'ny famaritana izay ilainao, ary hampiaraka anao amin'ny mpivarotra. Aorian'ny fanombohan'ny karamanao dia hizaha izy ireo raha te hahatratra ny fenitra avo lenta ananany.
Ny dingana ho MarketerHire haingana sy seamless:
Farito ny tetikasanao - Lazao amin'ny MarketerHire momba ny tetikasanao. Mitady manam-pahaizana amin'ny fantsona tokana ve ianao sa hanangana ekipa misy fantsona maro? MarketerHire dia handahatra antso miaraka aminao hianaranao bebe kokoa momba ny tetikasanao ary hahazoana fahalalana bebe kokoa momba ny zavatra ilainao marina.
Hihaona amin'ny mpivarotra tonga lafatra anao - Raha vantany vao takatry ny mpitantana ny varotrao ny tetikasanao, dia hikaroka ny tambajotran'ireo mpivarotra izy ireo hahita lalao matotra. Lazao azy ireo fa tianao ilay mpivarotra atolotra anao ary handamina antso an-tariby izahay mba hahitanao azy ireo sy hamerenanao ilay tetikasa. Raha tsy azonao antoka ny momba ny mpiasa tsy miankina, dia hanangana intro bebe kokoa izy ireo.
Atsaharo ny tetikasanao - Raha vantany vao ankatoavinao ny mpivarotra anao, dia ho vonona izy ireo hanomboka ilay tetikasa ary hiditra ao amin'ny ekipanao. Hizaha maso isaky ny roa herinandro ny mpitantana anao. Raha na inona na inona antony tsy ankasitrahanao amin'ny mpivarotra anao dia hampifanaraka anao amin'ny iray vaovao izy ireo.
Tsy misy fandefasana asa, tsy misy dinidinika, tsy misy aretin'andoha… andramo MarketerHire amin'izao fotoana izao. Ny anjara toerana misy dia ny mpivarotra Amazon, mpivarotra marika, Chief Officers Marketing, mpivarotra atiny, mpivarotra mailaka, mpivarotra fitomboana, mpivarotra SEO, mpivarotra karama, mpivarotra haino aman-jery sosialy, ary mpivarotra media sosialy karama.
Manakarama mpivarotra Misorata anarana amin'ny maha-Freelancer anao
Fampahafantarana: Mampiasa ny MarketerHire rohy mpiara-miasa ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: mpivarotra tsy miankinamarketerhirempivarotramarketing tsy miankinampivarotra fikarohana karamampivarotra media sosialy karamampivarotra mandoa isan-tsindrympanao dokambarotra amin'ny haino aman-jery sosialymedia sosialy